Uhuru Kenyatta oo dib loogu doortay madaxweynenimada Kenya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUhuru Kenyatta oo dib loogu doortay madaxweynenimada Kenya
August 11, 2017 Puntland Mirror World 0
Uhuru Kenyatta. [Xiashada Sawirka: AFP]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha hadda jooga ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la iclaamiyay in uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada.
Sida ay iclaamiyeen Guddiga Doorashooyinka, Uhuru ayaa helay 54.27 boqolkiiba codadka doorashada halka ninka la loolamayay Raila Odinga uu helay 44.74 boqolkiiba.
“Waxaanu sii wadi doonaa shaqada aanu bilownay,” ayuu yiri Kenyatta kadib ku dhawaaqista natiijada.
“Dadka Kenya waxay doonayaan anaga si ay u guulesytaan.” ayuu ku sii daray.
In ka badan 15 milyan dad ah ayaa dhiibtay codkooda iyaga oo u dhigma 78 boqolkiiba.
Kenyatta, oo ah wiilka aabaha asaasay Kenya ayaa sanadkii 3013 loo doortay madaxweynaha Kenya, isaga oo noqday madaxweynihii abaid ugu da’ yaraa ee la doorto, hadda waxa uu dalkaas kuyaala Geeska Afrika hoggaamin doonaa shanta sanno ee soo socota.
Mucaaradka oo qaadacay
Waxyar kahor intaan la iclaamin natiijada, xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in ay qaadici doonaan natiijadda.
“Ma rabno in aan qeyb ka noqono doorashada. Arrimahayagii lagama hadlin,” Musalia Mudavadi, oo ah masuul sare oo katirsan Xisbiga Cusub ee Gaashaanbuursiga Qaranka (NASA), soona noqday madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya ayaa sidaa yiri.
Arbacadii, Raila Odinga, hoggaamiyaha wakhtiga dheer ee mucaaradka kaasoo markiisii afraad u tartamayay madaxtinimada ayaa qaadacay natiijada doorashadii Talaadada.
Waxa uu ku andacooday in hanaanka kumbuyuutarada ee codaynta la jabsaday oo la badalay natiijadda.
September 1, 2017 Maxkamada sare ee Kenya oo qaadacday natiijadii doorashada madaxtinimada Kenya
August 2, 2016 Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya oo ku tilmaamy ‘masuuliyad daro’ hadalkii Raila Odinga uu ku sheegay in maamulka Somaliland la aqoonsado
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia’s Puntland regions are facing the worst drought in decades, according to the pastoralists and officials. Mohamed Ise Yousuf, a nomadic pastoralist in Mudug region of Puntland, told Puntland Mirror that the drought [...]
Qardho-(Puntland Mirror) Labo qof ayaa ku geeriyooday hal kalena waa uu ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Qardho ee gobolka Karkaar maanta oo Sabti ah, sida uu sheegay masuul dowladda katirsan. Duqa [...]